Goorma ayey dadku isdiiwaangaliyaan Webinars? | Martech Zone
Friday, May 31, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dadka waawayn ee ON24, Webcasting, Virtual Event iyo webinar xal bixiye, waxay bixiyeen xoogaa aragti weyn oo ku saabsan shirkado kasta oo sameynaya websaydhka. Waxaan ku jecel nahay websaydhka halkan Martech Zone waxaanan la kaashaneynaa la-hawlgalayaashayada sidii aan kor ugu qaadi lahayn una fulin lahayn.
Halkan waxaa ah 4 Tilmaamood oo lagu hagaajinayo Websaydhkaaga
Kaqeybgalayaasha Webcast dib u dhig. 64% waxay diiwaangeliyaan usbuuca shabakadda tooska ah. Iyo soo saarayaasha webcast waa inay had iyo jeer sameeyaan "maalin dhacdo" kor u qaadista qarxinta si ay u helaan diiwaangeliyayaal daqiiqaddii ugu dambeysay, maaddaama 21% ay isdiiwaangelinayaan maalinta webinar.
TGIF! U dir e-maylka xayeysiinta Talaadada, maaddaama dadku isdiiwaangeliyaan Talaadada in ka badan maalmaha kale - iyo in ka badan laba laab ka badan inta Jimcaha.
Ka fikir bi-xeebeed. Inta badan ON24 webinarradu waxay ka bilaabmaan 11 subaxnimo Waqtiga Baasifigga, markay ku habboon tahay labada xeeboodba, taas oo kordhinaysa diiwaangelinta iyo xaadiritaanka.
Markasta oo la daawado. Daawashada dalbashada ayaa sii kordheysa. Xogta bartilmaameedka ON24 waxay muujineysaa in celcelis ahaan 25% kuwa ka diiwaangashan webinar kahor taariikhda tooska ah ay eegeen nooca xafidan ee xafladda.
Goorma ayey dadku iskudiiwaan geliyaan Webinar-kaaga?
Waa kuwan qaar ka mid ah tirooyinka degdegga ah ee Diiwaangelinta Webinar… halkan guji si aad u soo dejiso dhammaan Webinar Benchmark Report.
Tags: infographicSuuqgeynta Webinardiiwaangelintadiiwaangelinta webinar